Mayor İmamoğlu: 'Anyị ga-echebe ụlọ anyị akụkọ ihe mere eme dị ka ọdụm' | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulOnye isi obodo İmamoğlu: 'Anyị ga-echebe ụlọ anyị akụkọ mgbe ochie dịka ọdụm'
Onye isi ala Imamoglu ga-enwe ụlọ ọhụụ dịka ọdụm
Onye isi ala İBB Ekrem İmamoğlu, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan's Haydarpaşa na Sirkeci zara ndị nkwupụta maka nkwupụta ndị a. Imamoglu kwusiri ike na foto e mere n'ụlọ ọrụ ya na onye natara ọmịiko ahụ nwere ọfụma wee sị, “I meela ka ajụjụ gị bukwuo ibu. Na-emebi aha TCDD…
I mebila etu aha TCDD si ju. Ruo ugbu a, i mebila arụmọrụ gị, ọrụ gị na ihe ọghọm. Mana mmerụ ahụ buru ibu prefer na-ahọrọ inye mmadụ ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme abụọ nke TCDD, Sirkeci na Haydarpaşa, onye ị na-amaghị, na ị na-eme nnukwu mmerụ ahụ. Ọrụ anyị ga-abụ igbochi gị nnukwu ọrụ. Ruo na njedebe nke ụlọ ndị a mere ihe akụkọ, dị ka IMA, anyị ga-echebe dị ka ọdụm. Otu ụbọchị, ihere ga-eme gị. Ihere ga-eme nke a, Maazị Minister.
Onye isi obodo Metropolitan (IMM) Onye isi Ekrem Imamoglu, nzaghachi ọha na eze na Haydarpasa na Sirkeci, Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa kwupụtara nkwupụta ahụ na nkwupụta ahụ. Bus Inc. na World Trade Center Imamoglu, onye hụrụ igwefoto niile na Director General kwupụtara mmeghachi omume ya na okwu ndị a:
“ARÈ NA-AHRE? NIILE DARA? ”
Dịka n’abali ụnyaahụ, achọtara m na ọ dị mkpa ịkọrọ gị na ndị anyị, ọkachasị ụmụ amaala Istanbul. Mr. Nkwupụta mere site Minister ụnyaahụ, na mwute ikwu na ihe na mgbu, o mere ihe ọ bidder mara ụlọ ọrụ ọkàiwu, na-eje ozi nke Republic of Turkey emewo ka m, m na-aghọta. Ahụghị m ihe dị iche. Onye ọka iwu ga-agbachitere onye nwe ụlọ ọrụ a nke ụdị nro a bụ onyinye. Ma enwere ike bipụta ọdịnaya nchekwa dị otú a. Ke ini n̄kotde itien̄wed oro, ‘Ndi emenịm? Nke a bụ nkọwa 'Achọrọ m ịjụ. Ewela iwe. M mwute na nnọchite nke Republic of Turkey. Nke mbu, nkwupụta nke Onye Ndụmọdụ pịa na nkwupụta sochiri, ọ bụrụ na ọ bụ nkwupụta nke Minista ahụ, bụ nnukwu ihe ihere na akụkọ ihe mere eme. Ozi ya na ọka ikpe nwa amaala, enwere m obi nwute. O mere ya ihe ọjọọ. ”
“AKWESKWỌ PATARA PATARA DARA”
Ası Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ajụjụ na ọbụna ụlọ ọrụ na-enweghị ebe nrụọrụ weebụ nke nwere isi nke 10 puku pound mụbara isi obodo nke nde 1 nde ụbọchị tupu ụbọchị nleta nke abụọ mgbe ị na-anata ọmịiko a. Kedu ụdị mgbaàmà o nwetara? Kedu ka o si nweta ịdọ aka ná ntị? Olee otú o si nwee mkpa dị otú ahụ? Ahụrụ m 15 ka ọ bụrụ ihe akaebe bara uru n'oge ehihie ma achọrọ m ịdọrọ uche ụmụ amaala anyị n'okwu a. Know mara, M kwuwaala ya; nju ndi mmadu. Site na nkwupụta a, Minista ahọrọla iguzo n'akụkụ ọnụ ọgụgụ mmadụ, ọ bụghị 16 nde Istanbulites. Ọ bụ nkọwa dị oke egwu. Gịnị ka ọ bụ? Sir, 4 nwere onodu ime nde kwuru nde! N'ihi Chukwu; lee, anyị na-ekwu naanị banyere Kültür A.Ş. Enwere njikwa ụlọ ọrụ 254, ha anọ nwere ikike enyemaka nke steeti, IMM. Naanị otu n'ime ha nwere nde kwuru nde 4. Na-ekwu banyere ahụmịhe ọrụ ma ọ bụ ihe ngọpụ. ”
“MAKA ozi a ka obodo a na-agaghị agacha!
"Yabụ ọ bụrụ na ị ga - ahụ: 'Otu onye nyere 100 puku TL, onye nke ọzọ nyere 350 puku TL!' Onye ụkọchukwu, n'ụzọ dị otú a, 'nyere ezigbo ego. Enyere ya ihe nro dịka 'ịkọwa nkọwa… nke adịghị mma. Nke ahụ abụghị eziokwu ma. Gịnị kpatara na ọ bụghị eziokwu? Even kpọtụghị anyị ka anyị banye na nke abụọ. I kowara ihe di nro na uzo 2; Na ọkwa nke mbụ ị nwetara onyinye ahụ, na ọkwa nke abụọ ọ dịghị onye maara ebe ị ga-aga na ahia ahụ. Otutu ugha ugha, 'ego karie' na ihe ndi ozo; G in ibu mkpali? M na-ewe iwe. Onye a họpụtara ịbụ minista a na-ahụ maka mba a enweghị ike ikwu nke a. Nke a agaghị ekwe omume. ”
“ID D NOT KA Ọ D I KA I GHARA IBI”
Enweghị m ebumnuche ịkọpụta okwu nke Minista ebe a; mana enwere ahịrịokwu dị mkpa: 'Gịnị kpatara IMMoğlu ji nwee nsogbu n'ihi na enwere puku kwuru nha nke mpaghara ndị a n'aka IMM ebe a ga-edobe oghere ọdịbendị na nka ọhụụ maka abamuru nke ọha mmadụ n'akụkụ nke ndị dị nro.' Chukwu gbue ya! Maazị Minista, ị maara ọrụ ahụ? Enweghị oru ọ bụla. Ndi obi ebere a gosipụtara gị ọrụ ahụ? Omenala na omenaala ogbara ohuru? Kedu ka ị si mara? Ọ gosipụtara gị usoro? Anọ m na-eche. Obi ike, etu ha si mara ụlọ ọrụ ha nyere ndị ọrụ ntanetị a; Ị mara! Ọ na-egbu mgbu karị; Iz have nwere ọtụtụ puku ugboro karie mpaghara ndị a… Mazị Mazị Minister, ị gaghị enwe ike inwe Istanbul. Turkey ugbu a nwere obi abụọ ma ị na-eche. Anyị na-ekwu maka mpaghara abụọ bara uru nke Istanbul. Otu bụ Haydarpaşa, nke ọzọ abụrụ Sirkeci. N’aka ozo, anyi na ekwu banyere uzo ihe ngosi abuo nke kara akara akuko nke obodo a na obodo a ihe kariri otu narị. I buliela, ‘Gịnị mere ị na-eme mkpọtụ? You nwere ọtụtụ puku mpaghara n'aka gị… a ga-ehiwe ihe owuwu ọhụụ 'ka ị na-ekwu. "
“O mewo ka ihe osise foto
Ugbu a Minista ahụ enweela mmetụta dị ukwuu na foto ahụ! Foto ahụ i were n’ọfịs gị abaala ezigbo uru. I meela ka ajụjụ dị ukwuu nke ukwuu. O doro anya, 16 bụ ihe mkpali maka ọtụtụ nde mmadụ iji lekwasị anya na ọdịbendị na nka nke obodo a, mmadụ, aka ọtụtụ mmadụ, onye na-edoghị anya, anyị amaghị ihe anyị ga-eme… Amaghị m. Ikekwe ị maara nke a karịa. Na-ewelite ajụjụ a. Ebumnuche gị maka nke a na-emebi aha TCDD. I mebila etu aha TCDD si ju. Ruo ugbu a, i mebila arụmọrụ gị, ọrụ gị na ihe ọghọm. Mana ị na-eme mmebi ahụ dị ukwuu site na ịnwa ịhọrọ akara akụkọ ihe mere eme abụọ nke TCDD, Sirkeci na Haydarpaşa, onye ị na-amaghị. Ọrụ anyị ga-abụ igbochi gị nnukwu ọrụ. Ruo na njedebe nke ụlọ ndị a mere ihe akụkọ, dị ka IMA, anyị ga-echebe dị ka ọdụm. Otu ụbọchị, ị ga-eme ihere. Ihere ga-eme nke a, Maazị Minister. ”
ANA ANPR M KA ANY YOU N'YOULARA MGBE OFBỌCH M NKE DBỌCH ””
"M, ikpe nke Republic of Turkey, ka m tụkwasịrị obi ikpe ziri ezi. Anyị etinyela akwụkwọ maka nde mmadụ 16. Anyị ga-agbaso oge ọ bụla nke ngwa a n'aha ndị nde 16. Anyị ga -achọ ikike iwu anyị zuru oke. Legal ikike mgbe enyocha, dị ka ndị a Turkey bụ kpọmkwem ihe Mr. Minister kwuru, mba ịdị n'otu na ụbọchị a Olee anyị mkpa, a mfe isiokwu, a akụkọ ihe mere eme ebe pụrụ inye ọzọ ọha alụmdi nke a n'ihu ọha alụmdi site n'ịnapụta a njuaka mmadụ na otú a, Akpọrọ m gị ikpe, Maazị Minister, maka imebi mmụọ nke usoro ime mmụọ na nke mba a. On nọ n'akụkụ nke ọzọ. M na-ama gị ikpe. Nwere ike nweta usoro a site na ezigbo mmadụ, ezigbo mmadụ, mba na ezigbo mmụọ. Agbalịrị m inye gị ohere, ma ị kụrụ afọ n’ala. N'ihi na ị nwere ihe ọzọ na-akpali gị. Aghọtaghị m, mana otu ụbọchị ọ ga-apụta. Knowmara ihe ị na-eme adịghị mma. Enwere m olileanya na ụlọ ikpe ga-agbazi nke a ma ihere ga-eme gị nke ukwuu. ”
D C KA EGO NA-EKWUTA NA Nlekọta Onwe Gị ”
Imamoglu zara ajụjụ site n'aka ndị nta akụkọ. Ajuju Imamoglu ajuju ya na azịza nke onye isi ala IMM bu ndi a:
Içerisinde Mgbe amachibidoro gị iwu ndị ọrụ ọdụ ụgbọelu, a na-ebo ndị mmadụ ebubo na ha na-emegbu gị ma ọ bụ na-emegbu ndị obodo Istanbul o. ”
The Republic of Turkey bụ ọnọdụ nke iwu, na ihe iwu na-akpọ nri ka ezi na ọ bụ m bụ onye ma nke ọma. Na ụnyaahụ na nkwupụta, megidere iwu, megidere statesmanship na n'ezie e nwere ọtụtụ ihe ọjọọ, nke pụtara na ahịrịokwu ndị megidere Turkey si ndutịm na ego na usoro. Ọ bụ ya na-eme ka ọha mmadụ na-akpasu iwe site n’omume ya na nkọwa ya; mana ndị nke Istanbul nwere uche ma nwee ọgụgụ isi nke na ha ga-ama ikike ha n’uju. Anyị na-aga iwu, anyị na-achọ ikike anyị. Ọzọ, Maazị Minister, a na m akpọ gị oku ka ị bụrụ onye ozi ọzọ. Enwere m olileanya na ị nwere ike idozi mmejọ gị. Maka aha nke aka gi na oru aka gi.
ZU Akpọghị m oku! ”
"N'ime akaebe ya, onye ozi ahụ na-ekwu, 'Ka anyị nye njikọ aka na-enye 350 puku TL kama inye 100 puku TL, nke ahụ agaghị abụ ihe ziri ezi,'" ọ na-ekwu. There nwere ụdị onye ahụ? ”
Ihu mbu, inata onyinye enyere gi aka. Otu akụkụ 100 puku puku, akụkụ nke ọzọ nyere 300 puku pound. Lee, ka anyị wezuga akụkụ nile nke omume na omume. Ka e were ya na ị nọ n ’ụdị ọ bụla. Say sị, 'A ga m atụle akụkụ nke abụọ.' Didn'tkpọghị m! I machibidola nde mmadụ 16, IMM. Nwoke ahụ batara naanị ya. Know ma ihe dị ebe ahụ? A kpọọla gị? Anything ma ihe ọ bụla? 'Input na 350 nyere otu puku pound!' Ijide usoro otu oge. From nụrụ site n'ọnụ anyị na amachibidoro anyị iwu. Anyị mere ihe ozugbo anyị nwetara akwụkwọ ahụ. Ọrụ emeela. A kpọghịdị gị. A machibidowo anyị iwu. Enwere ọtụtụ akara ajuju miri emi ị na-elele na nkwupụta onye ozi. Ọ bụ ihe nwute. Onye ozi ahụ nwere obi ebere maka ọrụ ya niile. Ọ na-egbu m mgbu. Ọrụ gị niile.
Mee ka ozi ka m nwee ike ịhapụ okwu mmezi ”
Mı you ga-arịọ nzuko ka o soro gị na onyeisiala? ”
- Kedu ihe kpatara m ga-eji chọọ ka m na onye ụkọchukwu nwee nzukọ? Odeakwụkwọ ahụ ga-achọ ịhụ m. Ọ chọrọ ịhụ m ka m mezie mmejọ ya niile. Ibọchị m kpebiri, m kwuru, 'Anyị ga-abanye ndị enyi, anyị ga-ewerekwa ọnọdụ a n'aha Istanbul "Mgbe m kwuru na nnukwu mkpali, o kwuru nkwupụta site na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi,' cannot gaghị abanye nke a '. Na-emechu ihu. Kedu ihe kpatara m ga-eji kpọọ Minister? “Anyị ga-abanye, kee ihe anyị kwuru. Ka anyị lee ma ọ kpọrọ òkù wee gwa anyị ihe mere na anyị agaghị abanye. Ọ gaara agwa gị. Ya mere, abum onye isi obodo nke ndi mmadu nde mmadu nke ahuru 16 ndi ahuru. N'echiche ahụ, m ga-ahụ onye ọ bụla mgbe emesịa a. N’ezie a ga m akpo; imezi njehie ahụ.
“IME A B PGH A IME IHE N'UNLỌ NCHE”
Unuzz ikwuru na aghotaghi m mkpali. Otu na-achị achị nwere ọtụtụ ihe emere na Istanbul. Haliç Congress Center, Lütfü Kırdar wdg. Mana ebe ndị a gafere IMM. Enwere enwere mkpali dị otú ahụ ime mmemme n'akụkụ akụkụ Anatolian na Europe? Kedu ihe ị chere?
The Republic of Turkey bụghị a ala ọzọ, ọ bụghị party municipalities na IMM. Ebe egwuregwu anyị niile, omume ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị, ihe omume ma ọ bụ ngosipụta, ebe niile ndị Republican People’s Party meghere maka Justice na Development Party, yabụ mepere Party. Oge ha agwụla. Ọdịiche ahụ bụ n'oge ha. Ọ bụghị ugbu a. Anyị na-emeghe ha ebe ọ bụla ha chọrọ. Ọ bụrụ na ọ na-eche, echegbula.
ORUM Enwere m olileanya na onye ọzọ dere ederede a ”
Mı hadnyochala nyocha? Ewepụrụ ya n'obodo mgbe ọ dị nro ma ọ daa mbà mgbe enwere ọmịiko ọ ga-enweta… ”
O doro anya na ọ dị m mkpa ịju ya kpamkpam ugbu a n'okpuru akara ajụjụ a. Anyị kwesịrị inyocha ya nke ọma. Anyị na-ajụ ọtụtụ mpaghara, mana nke a bụ paragraf ọzọ. Yabụ ugbu a, anyị ga-elele ngwa ndị gara aga. I kwuru eziokwu, anyị ga-anọdụ ala lee ajụjụ a nke ọma. IBB, mpaghara ụfọdụ kwesiri ịdị na ọha, enwebeghị mmasị n'omume ndị gara aga? Ọ hapụrụ ya? Ọ chọghị ịma, ya mere o nyefere ndị ọzọ? Lee, Anaghị m ekwu okwu banyere Ekrem İmamoğlu, anaghị m ekwu maka enyi. Nde mmadu 16 nwere mmetụta nke akụkọ ihe mere eme nke Sirkeci na Haydarpaşa… Ha na-achị ọchị ma ọ bụrụ na ị na-agwa ụwa ihe a. Ihere, mehie. Kedu ka ị ga - esi rụọ ụka na nke a? Anie edi, ke ntak Abasi? 10, nke onye ọ bụla amabeghị ruo ụnyaahụ, enweghị saịtị ntanetị, nke nwere isi otu puku pound, nke ahụ bụ onye kachasị atụ anya n'ụwa, ọ bụghị naanị maka Istanbul. , akara nke ọtụtụ oge. Sirkeci ụgbọ okporo ígwè, niile Thrace, nwa Al-Fatiha ka Turkey-abịa n'ebe ahụ, ị ​​na-na ọ na akara ngosi Sirkeci Mbugharị nke mgbapu n'ala nna, lụtara usoro, a onye dị na-enwe mmetụta dị ka a nwa toy okwu, ị na-na na a ọkàiwu napụta a njuaka ndị mmadụ ma ọ bụ. Ọ dị mfe. Sọsọ nke obodo, ị ga-asị na oge, yabụ mba, anyị kwesịrị ịnọkọta ọnụ n'oge ị na-elele nfe. I ji ndi mmadu mgbaghara. Ugbua ekwuru m, ana m enye Minista ahụ ohere ọtụtụ oge tupu ndị isi nke elu ebigide usoro a. Ana m enye gị ohere ọzọ. Gbanwee ihe ọjọọ. Enwere m olileanya na onye ọzọ dere ederede a. Rịọ mgbaghara, ị bịaghachila. Enwere m olileanya na ị idozi ya tupu ibugharị ya na ndị isi. Echere m na ọtụtụ ndị nọ n'ọchịchị na ndị otu gị bụ ndị ihere n'okwu gị. Enwere m ya obi.
Minista Turhan: "N'afọ a anyị ga-aga Channel Istanbul Obi"